हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा : असफल हुनसक्छ ! - दर्पण संसार
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा : असफल हुनसक्छ !
२०७९ बैशाख २२, बिहीबार १६:३३ बजे
काठमाडौं । सरकारले जेठ १ गतेदेखि हप्तामा दुई दिन साप्तहिक बिदा दिने निर्णयप्रति पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको छ । परीक्षणका लागि भन्दै हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णयले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई असहज देखिएको छ ।